‘सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ, अदालत र आयोगले चार्ली च्याप्लिन चिन्छ’ – Nepal Press
‘सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ, अदालत र आयोगले चार्ली च्याप्लिन चिन्छ’
२०७७ पुष १८ गते १६:५५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नु चार्ली च्याप्लिनको खेल जस्तै हो भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा ओलीले सूर्य चिन्ह र नेकपा आफ्नै नेतृत्वमा रहने बताए ।
ओलीले भने–हाम्रो अदालतले चार्ली च्याप्लिन चिन्न गल्ती गर्दैन । निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्दैन । जुँगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, कुम हल्लाएको देखेर चिन्छ चार्ली च्याप्लिन को हो भनेर । सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ, पार्टी हाम्रो हो ।
ओलीले प्रचण्ड माधव पक्षले बहुमत हामीसँग छ भन्नु गफमात्र भएको बताए । ओलीको प्रश्न थियो–कहाँको बहुमत ? कुन महाधिवेशनको बहुमत ? कुन कार्यकर्ताको बहुमत ? कहाँबट आयो बहुमत ? तपाईहरुले उनीहरुलाई भोट हाल्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले भीम रावलतर्फ संकेत गर्दै कार्यकर्ताले जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ धनगढीको बैंकबाट अस्तिनै चैट् पारेछन् भने । उनले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको ध्यान बैंक खातामा राखेको पैसा र पार्टीका कार्यालय तथा जमीनमा रहेको आरोप लगाए ।
प्रकाशित: २०७७ पुष १८ गते १६:५५